Kuratidza zvinyorwa neelebheri webmaster
Zvishandisi zvemasimiti eGoogle
Unoda kuwanikwa pawebhu? Tichafara kukubatsira. Kuyera kuita kwewebsite yako neGoogle Search Console uye uwane zvimwe webmaster zviwanikwa.
Tora tsigiro yenzvimbo yako. Kana chimwe chinhu chisina kunaka nesaiti yako, tarisa yedu runyorwa rwezvinyorwa zvepamusoro, zvinyorwa, uye zvekuedza matanho ekubatsira nekukurumidza.
Dzidza maitiro ekugadzira masaiti akanaka. Unoda kugadzira saiti iyo yakanakira vashandisi uye nyore kuona mumhedzisiro yekutsvaga? Edza edu tutorials uye madhaireti kuvaka mhando, yekutsvaga-inogonesesa nzvimbo.
Batsirai Google kuwana yako saiti: Ita shuwa kuti peji rega rega pane yako saiti rakabatana nemamwe mapeji anotsvaga. Iyo sosi yekubatanidza inofanirwa kunge iine chero zvinyorwa kana, kana iri mifananidzo, iyo aridhi hunhu hwakakodzera kune iyo inotakura peji. Iwe unogona kukamba zvinongedzo zvakagadzirwa ne <a> tag neiyo href hunhu. Ipa Sitemap ine zvinongedzo kumapeji anokosha pane yako saiti. Ripawo peji rine runyorwa rwezvakakodzera zvinongedzo kune iro peji…